Rahalahin'ny Belfort FSX & P3D Rahalahin'i Belfast
fanontaniana Rahalahin'ny Belfort FSX & P3D Rahalahin'i Belfast
1 taona 2 volana lasa izay #837 by Dariussssss
Raha fintinina, ny AP dia tsy miasa tsara. Ny haavon'ny toerana, ny laharana ary ny fihenana haingana dia tsara, saingy tsy manaraka ny làlana GPS izy. Ny zavatra hafa dia toa tsara sy tsara fiaramanidina.
1 taona 2 volana lasa izay #838 by Gh0stRider203
Nofintininao tamin'ny GPS ny fomba? LOL Azafady ny fanalahidy izay nomaninao ho an'izany raha toa ka tsy misy fikandrana fa amin'ny Mine, Ctrl Shift N
1 taona 2 volana lasa izay #839 by Dariussssss
Hey Gh0st, inona no atao?
Marina daholo ny zava-drehetra. Ao amin'ny AP izy io, ny fiovana, noho izany, dia mety ho mora kokoa noho izany.
1 taona 2 volana lasa izay #840 by Gh0stRider203
Tsara, avy eo afaho ny mpanamboatra lol anao
1 taona 2 volana lasa izay #841 by Dariussssss
Haha .... tena mampihomehy.
Lol..yeah, angamba io idika io dia mety ho avo lenta raha nibanjina ny AP izy.
1 taona 1 herinandro lasa izay #938 by DRCW
Jereo ny fizotry ny CFG ao amin'ny fizarazan'ny autopilot, raha tsy mahita olana ianao, manandrana manamboatra ny autopilot CFG hafa, ary ampio ny navigateur Nav / GPS avy amin'ny fiaramanidina hafa ho 2D pop up ary ampio amin'ny panorenana panao